MH Industrial - Banyere anyị - Ningbo MH
Ka ọ dị ugbu a, MH nwere ụlọ ọrụ itoolu nke na-agbasasị na ntọala atọ. Ụlọ ọrụ itoolu bụ: MH Embroidery Thread Factory, MH Lace Embroidery Factory, MH Band and Rope Factory, MH Trimming Factory, MH Crochet Lace Factory, MH Ribbon Factory, MH Ụlọ ihe na-edozi ihe, MH Bias Binging Factory na MH Polyester na-atụgharị ihe nrụpụta ihe.
Ụlọ ọrụ MH Ụlọ Ọrụ! Pịa Ebe a
The embroidery eri ụlọ ọrụ na-ekpuchi 20,000 square mita ma nwekwa usoro dum nke ntụgharị, nyi na ịkpụzi ihe ndị nwere ike iji rata eri na polyester embroidery eri na nkọwa dị iche iche na mbukota.
MH lace emepụta ihe bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ndị ọkachamara na-arụ ọrụ nke nwere 83,000 square mita ogbako ma jikọta ihe ntanetị, imepụta, mmepụta na ahịa. Ọ nwere ụdị 27 nke ígwè ọrụ ntanetị Schiffi dị iche iche na nke 400 nke Tajima, Behringer na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụnye ọrụ. Ihe ndị bụ isi bụ owu lace, larịị lace, akwa lace, lace crochet na ákwà, akpa ákwà, akwa akwa ákwà, akwa ákwà akwa, akwa ákwà, ákwà mgbochi na akwa ejiji, sequins / nkume na-ekpo ọkụ na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ.
Ribbon & teepu teepu
MH ribọn & teepu mmepụta ihe bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke oge a pụrụ iche maka mmepụta nke ihe dị iche iche. Ọ na-ekpuchi 45,000 square mita ma nwee 100 setịpụrụ igwe jacquard kọmputa, ihe ntinye 2,000 dị na ya, ụdị ntinye 100 dịgasị iche iche nke (ọ bụghị) igwe mpempe akwụkwọ yana usoro mmepụta nke teepu na ihe nkocha mkpịsị na ntinye 1,000 kwa afọ. Ihe ndị dị na ya bụ ụdị ọnya owu, ụrọ teepu, eriri akpa, teepu teepu, eriri akwa, eriri akwa, akwa eriri, teepu mgbochi, teepu na teepu na ihe ndị ọzọ dị iche iche.
MH Industrial Home Categories --Na-atụgharị --Zippers --Ribbon & Tape --Ụzọ --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming --Tailoring Ngwa --Garments & Ngwa --Nweghari Machine & Akụkụ --Fabric --Onye ozo gbasara Anyị --MH Isi --MH Industrial --MH History --Trade Na-egosi - Ndị ọrụ anyị - Oghere Image - Album vidio Kpọtụrụ Anyị --Odi ebe --Feedback Community --Blog --App --Sonyere anyị